Tattoo dayaxa | Tattoo
Tattoo Dayaxa: dhammaan macnaha iyo naqshadaha
Nat Cerezo | | Tattoos
Dayaxa ayaa had iyo jeer ahaa jilaaga sheekooyin iyo mala awaal badan. Yaa aan la dhacsanayn inuu arko dillaacyada dayaxa, oo u muuqda inuu yahay weji? Dayaxa ayaa had iyo jeer ahaan doona jiilka sheekooyin badan wuxuuna ku sii jiri doonaa nolosha dad badan. Dayaxu waa astaan ​​heli doonta macneyaal iyadoo ku xiran hadba qofka ku dhejiya, laakiin mar walba waxay ahaan doontaa iftiinka mugdiga.
Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa xaraashka ee dayaxa iyo waxa ay ula jeedaan, tan iyo xiddigtii habeenku waxay leedahay boqolaal macno oo kala duwan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku siin doonnaa fikrado ku saabsan tattoo -gaaga xiga ee ku habboon macnaha kasta si aad u hesho naqshaddaada ugu habboon.
1 Magnetism -ka aan u dareemo dayaxa
2 Macnaha tattoos dayaxa
2.3 Dayax qabiil
2.4 Yeyda iyo dayaxa
2.5 Dayaxa oo sii libdhaya oo sii yaraanaya
2.6 Unalome oo dayaxa leh
2.7 Dayaxa oo leh riyo -doon
2.8 Badmaaxe Moon
2.9 Dayaxa sarbeebta ugu yar
Magnetism -ka aan u dareemo dayaxa
Dayaxu waa naqshad tattoo oo rag iyo dumarba muddo dheer soo jiitay oo sidaas ayay ahaan doontaa iyada oo aan shaki ku jirin quruxda xad dhaafka ah. Waa tattoo mar walba caan ku ahaa oo sii ahaan doona oo waa in tattoo fool xun uusan soo bixi karin marka dayaxu yahay jilaaga.
Dayaxa, wehel aamin ah oo ka soo horjeeda boqorkayaga xiddigga, saaxiib iyo cadow ... iftiinka mugdiga ku jira, ujeeddada khuraafaadka badan oo bini -aadamku mar walba xoogaa siin jiray tamarta dayaxaWaxay had iyo jeer ahaan doontaa cunsur nolosheena ka mid ah oo aan ka maqnaan karin inaan dareemo inaan ku dhammaysanahay deegaankeena.
Macnaha tattoos dayaxa
Dayaxa, sida jilaaga ku jira tattoos, wuxuu bixiyaa wax badan laftiisa, labadaba muuqaalkiisa iyo kan macno badan oo ay yeelan karto. Marka xigta waxaan ka hadli doonaa kuwa ugu midabbada badan waxaanan ku siin doonnaa fikrado ku saabsan tattoo -gaaga mustaqbalka.
Dad badan qorraxdu waxay u taagan tahay tamarta ragga iyo dayaxa dhinaca dheddiggaTaasi waa sababta marar badan oo tattoos ah dayaxa loogu daro qorraxda. Waa astaanta dheelitirka dabiiciga ah ee waxyaalo: mugdi iyo iftiin, nin iyo naag, lab iyo dheddig. Marka curiyeyaashan la isku daro, waxay ku daraan dheelitirnaan iyo wada noolaansho adduunka ka jirta.
In kastoo qaab -dhismeedkii sagaashameeyadii ahaa ee qorraxda iyo dayaxa la isu geyn lahaa ayaa dhammaadayWaxaa jira siyaabo kale oo xiiso leh oo looga faa'iideysan karo tattoo -kan, tusaale ahaan, lala wadaago qof ama leh naqshad aad u jilicsan, oo ay dhiirrigelisay mandalas.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan arrintan, tusaale ahaan, waa tattoos lagu dhiirrigeliyay yin iyo yang taasina waxay leedahay qorraxda iyo dayaxa sida jilayaasha.
Bedelkii, Tattoo -ga dayaxa wuxuu kaloo noqon karaa mid madaxbannaan iyada oo aan loo baahnayn in sidoo kale lagu xardho qorraxda. Dayaxa laftiisa ayaa leh macnayaal badan oo kala duwan, in kasta oo laga yaabo in mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ay tahay tan ku saabsan wejiyada dayaxa, kuwaas oo loo arko inay yihiin astaanta dhimashada, dib -u -dhalashada iyo dhinaca mugdiga ah ee nolosha.
Tattoo ahaan, wejiyada dayaxa waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo madow iyo caddaan haddii la raaco qaab macquul ah. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale u muuqdaan midab weyn, iyo qaabab toosan oo, tusaale ahaan, qabsada gacanta ama lugta oo dhan.
Dayax-ku-dhiirrigelinta qabiilku wuxuu leeyahay macno aad u xiiso badan oo la xiriira isku-xidhka dhulka iyo dabeecadda qofka la tattooed. Yeygii la socday nashqadani waxay sii xoojinaysaa summaddan. In kasta oo ku jirta tattoo -ga naqshadaha qabyaaladda waxay u muuqdaan inay ku matalaan khad madow, sida aad ku arki karto midab kale waxay sidoo kale u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan waxayna ku helayaan macaan.
Yeyda iyo dayaxa
Halyeeygii hore ee Asaliga Ameerika wuxuu leeyahay yeeydu waxay mas'uul ka yihiin inay fiirsadaan xiddiga fiidkii (taasi waa, Venus), laga yaabee inay taas sabab u tahay, iyo caadooyinkeeda habeennimo darteed, xayawaankan ayaa aad ugu dhow dayaxa. Intaa waxaa dheer, Ingiriisiga dayaxa buuxa ee ugu horreeya sannadka waxaa loo yaqaannaa yeyda dayaxa.
Shaki kuma jiro waa naqshad aad loo jecel yahay macnaheeduna aad u hodan yahay oo aad ugu wanaagsan naqshado badan oo kala duwan, ha ahaato yeyda qaabka dhabta ah, oo siineysa culeys badan dayaxa, midab ahaan, madow iyo caddaan si ay riwaayad ugu hesho ...
Dayaxa oo sii libdhaya oo sii yaraanaya
Wejiyada dayaxa sidoo kale Aad bay hodan u yihiin marka la eego astaamaha. Tusaale ahaan, dayaxa bilaha ah wuxuu leeyahay astaan ​​la xiriirta fursado cusub, koritaan, iyo meel aadid. Taas beddelkeeda, dayaxa sii liicaya wuxuu la xiriiraa dhammaadka marxalad iyo bilowga marxalad kale.
Tattooskan waxay aad ugu muuqdaan qaabab fudud taas oo ka kooban wejiga aad rabto inaad metesho si aad u siiso dhammaan sumcadda uu mudan yahay.
Unalome oo dayaxa leh
Waxaan hore uga hadalnay waqtiyo kale oo ku saabsan dadka aan caqliga lahayn, in matalaad ku saabsan dariiqa muhiimka ah iyo ruuxa ee mid kasta. Marka la isku daro dayaxa, oo sidoo kale ah astaan ​​aad u xoog badan oo Hinduuga ah, waxaan gudbineynaa farriinta ah in waddadan ruuxiga ah la raaco iyada oo ujeedadu tahay in la gaaro iftiin saafi ah oo run ah.
Tattoo noocaas ah dayaxu wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican midab iyo naqshad madow iyo caddaan labadabaDhammaan waxay kuxirantahay haddii aad rabto inaad siiso naqshadda taabasho aad u wanaagsan oo aad u fiican ama haddii aad doorbideyso inay ahaato mid aad u jilicsan oo caqli badan, taas oo haddii ay tahay khadadka madow ee khafiifka ahi ay yihiin ikhtiyaarka ugu fiican.
Dayaxa oo leh riyo -doon
In kasta oo aanay xidhiidh la lahayn macno gaar ah, qabsadayaasha riyo wata oo aad u qabow. Dayaxa wuxuu si fudud ula xiriiraa tuugga riyo -doonka maxaa yeelay tuuggu wuxuu u malaynayaa inuu ficil sameeyo intaan seexanayno, isagoo u oggolaanaya riyooyin wanaagsan iyo nasiib wacan inay soo dhex maraan oo ay qabsadaan riyooyinka qarowga ah. Tattoo -ga dhexdiisa, naqshadda qallafsan ee riyo -qoraha ayaa xusuusinaysa mandalas, taasoo u horseedi karta naqshad qurux badan, murugsan oo aad u jilicsan.
In kasta oo aysan macno ahaan lafteeda ahayn, haddana waa sidaas waa astaanta jiil dhan oo soo barbaaray sagaashamaadkii, malaha taasi waa sababta Tattoo Sailor Moon aad loogu jecel yahay. Naqshadani waxay ku dhowdahay inay qasab tahay in lagu sameeyo midab ahaan, kaliya maahan sababta oo ah natiijada ayaa hubaal noqon doonta mid aad u faraxsan, laakiin sidoo kale inay ku metesho dagaalyahannada (ama dagaalyahanka inta badan adiga ku matalaya) midabkooda calanka, sida ku jira Tattoo -gacmeedkan quruxda badan ee Sailor Mercury.
Dayaxa sarbeebta ugu yar
Oo waxaan ku dhammaynaynaa dayaxa ugu sarbeebta badan, taas oo ah, midda waxay u jirtaa 384.400 kiilomitir halkan, tusaale weyn u ah kuwa jecel cilmiga xiddigiska, sheekooyinka sayniska ama taariikhda. Dooro inaad raacdo cirbixiyeen ama gantaal iyo naqshad madow iyo caddaan ah si aad u siiso riwaayad waxayna noqon doontaa mid cajiib ah.
Waxaad aragtaa in tattoo -ga dayaxu uu ku xirnaan doono sida aad rabto inaad u yeelato tattoo -ga, waxaa jira kuwa ku dhaygaga dayaxa nus bisad, iyagoo ku daraya fiidmeerta, shimbiraha, xiddigaha ama daruuraha. Waxaa jira naqshado badan oo dayax -gacmeedka dayaxa oo aad u wanaagsan inaad adigu aragtid oo aad u doorato midka aad ugu jeceshahay naqshaddaada. Noo sheeg, ma jirtaa wax macno ah oo dayaxa kuu soo jiitay gaar ahaan? Miyaad leedahay tattoo leh qodobkan oo ah astaamaha ugu weyn? Maxay kaaga dhigan tahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo Dayaxa: dhammaan macnaha iyo naqshadaha
Tattoos qaar ka mid ah saddexagalka, joomatari awood
Tattoo tattoos: ururinta naqshadaha iyo macnaha